adeegga goynta Birta - Industry Shiinaha Ruizheng
adeegga goynta Birta
Waa aanu ka shaqayn kartaa dhammaan noocyada kala duwan ee qaybaha sax sida looga baahan yahay macmiilka. sanco u fiican, gaarsiinta waqtiga. OEM saaraha leh tayo sare leh, qiimaha tartan rasmi ah. baaxadda 1.Product: Machining qaybo ka dhigay fallaadhihii gaaban, fallaadhihii mashiinka gaaban, qaybo ka mid dawo la'aan, sax naxaas qaybaha mishiinka fallaadhihii, qaybo ka mid sax, copper jeestay qaybo, axdi qarameedka CNC iyo qaybo ka jeestay. 2.Material: Carbon steel, ahama, aluminium, naxaas ah, oo naxaasta ahayd, copper, bir goynta free, ama sida ay codsiga macaamiisha. 3.Processi ...
Waa aanu ka shaqayn kartaa dhammaan noocyada kala duwan ee qaybaha sax sida looga baahan yahay macmiilka.
baaxadda 1.Product: Machining qaybo ka dhigay fallaadhihii gaaban, fallaadhihii mashiinka gaaban, qaybo ka mid dawo la'aan, sax naxaas qaybaha mishiinka fallaadhihii, qaybo ka mid sax, copper jeestay qaybo, axdi qarameedka CNC iyo qaybo ka jeestay.
2.Material: Carbon steel, ahama, aluminium, naxaas ah, oo naxaasta ahayd, copper, bir goynta free, ama sida ay codsiga macaamiisha.
Mashiinka 3.Processing: mashiinka CNC, xarunta machining, mashiinka shiidi doona, mashiinka lathe caadiga ah, mishiinka axdi qarameedka, mishiinka qodista, mashiinka goynta silig, mashiinka bar si toos ah, mashiinka boolal Swiss.
4.Finishing: Zinc dahaadhay, dahaadhay nickel, dahaadhay chrome, phosphating, qiraan, kiiska adkaansho, qalbi engegnaantooda aawadeed carburization, anodizing, xabagta madow.
xarunta 5.Testing: mashiinka qiyaas, inaad ahaatid roughness, inaad ahaatid engegnaantiinna aawadeed, Ester concentricity.
6.Package: bac caag ah Inner, kartoonka dibadda ah, shaqabaq, ama looga baahan yahay.
7.OEM soo dhawaynaynaa, oo injineerada farsamo khibrad iyo qalab casri ah Kormeerida, our warshad kaa caawin karaan inaad hoos u qiimaha leh tayo sare leh.
Waxay ku taallaa in Dongguan ee Shiinaha, Annagu waxaannu nahay saaraha ah oo ku takhasusay siinta adeeg machining sida codsiga macaamiisha iyo sawiro faahfaahinta, labada largequantity yar ama waa la aqbali noo.
Next: qaybo bir ah
habka boolal Custom
adeegga iyo leexashada CNC
qaybo qalab sax
Sax processing aluminium